Soo hel Shirkadaha booqanaya bartaada | Martech Zone
Toddobaadkan waxaan kaqeyb galay banaanbax xiiso badan oo Dalbashada Baahida?. Demandbase Stream waa Hawada Adobe codsi kuu oggolaanaya inaad kormeerto taraafikadaada shabakadda waqtiga dhabta ah.
David Lieberman, Madaxweyne Ku-Xigeenka Horumarinta Ganacsiga wuxuu sharraxayaa Baahida loo qabo:
Demandbase Stream waa barnaamijkii ugu horreeyay ee bilaa biraawsar ee u oggolaanaya iibka iyo suuqgeynta dadka inay ogaadaan meheradaha booqanaya degelkooda, waxa dantoodu tahay, iyo cidda lala xiriirayo. Adoo soo dejinaya free Dalbashada Baahida? qalab iyo isku xirka websaydhka iyo Dalbashada tooska ah ?, qof kastaa wuxuu u rogi karaa booqashooyinka Websaydhka ee macaamiisha iibka waxqabadka leh.
Laga soo bilaabo calaamadda ka socota guud ahaan isticmaaleyaasha desktop-ka ayaa ka daawan kara macluumaadka taraafikada ganacsiga, faahfaahinta shirkadda, iyo xiriirrada lagula taliyay daqiiqado gudahood. Isticmaalayaasha ayaa sidoo kale dejin kara dookhyada si ay u shaandheeyaan taraafikada meelaha ka baxsan aagga iibka ama Bixiyeyaasha Adeegga Internetka (ISP's).
Tani dhab ahaantii waxay beddeleysaa warshadaha! Haddii aad tahay suuq ka shaqeynaya B2B, waxaad awoodi kartay inaad kaliya ku aqoonsato shirkadahaas ka diiwaangashan bartaada adoo adeegsanaya Wicitaanka Waxqabadka (soo dejinta warqadda cad, webinar, iwm.) Tikniyoolajiyaddan, waxaad ku arki kartaa cidda ku jirta goobtaada waqtiga dhabta ah!
Nooca Pro-ka ayaa xitaa ka xiiso badan, dabagal iyo awood kuu siinaya inaad kala soo baxdo xogta firmagraphic! Ka hadal matoor dhaliyaha. In kasta oo aysan ku siinin macluumaadkooda, tani waxay awood kuu siineysaa inaad si firfircoon ula xiriirto shirkadda si aad u ogaato haddii ay u baahan yihiin caawimaad dheeraad ah. Tani waxay aakhirka u horseedi doontaa koror iib ah!
Tags: suuq geynta Bluetoothdigbydigby localpointiphone beta tijaabintamobilada maxaliga ahmeesha ka warqabaanMari Smithcalaamadeynta bulshadadaruur tag
HD Video wuxuu qeyb ka noqon karaa Istaraatiijiyadaada Suuqgeynta
19, 2008 at 6: 53 PM
Qalab cusub oo fiican. Xudunta ganacsigeena waxay u jiheysay dhanka ganacsiyada kale, marka tani runti waxtar ayey yeelan kartaa. Waxay umuuqataa inay fiicnaan laheyd “kululaynta” raadadka qabow.